Qisooyinka Qoor Qoor qeybta 3-aad "Dilkii Ninkii Maalin Taajir lacagta la dhacay ee Xawaadle"
Wednesday June 24, 2020 - 05:57:01 in Warar by Super Admin
Cabdi Madoobe Xuseen Xalane oo loo yaqaan Maalin Taajir Xuseen Nirig iyo Saaxiibkiis Carte Cabdi Cilmi ayaa lacag badan ka dhacay Ciidankii Mareykanka ee Muqdisho ku joogay magaca UNISOM kadibna lacagtii waxaa la baxsaday Cabdi Madoobe oo u dhashay b
Cabdi Madoobe Xuseen Xalane oo loo yaqaan Maalin Taajir Xuseen Nirig iyo Saaxiibkiis Carte Cabdi Cilmi ayaa lacag badan ka dhacay Ciidankii Mareykanka ee Muqdisho ku joogay magaca UNISOM kadibna lacagtii waxaa la baxsaday Cabdi Madoobe oo u dhashay beesha Saleebaan Habargidir.
Cabdi Madoobe Xuseen Xalane oo ah nin aad u qalbi fiican ayaa markii dambe go’aansaday inuu Lacagta uu xaqa u leeyahay siiyo Saaxiibkiis Carte Cabdi Cilmi oo u dhashay beesha Xawaadle gaar ahaan Yabar Xawaadle , Juffadda Candhaale Tuuroow.
Maalin Taajir wuxuu u sheegay fariintii Aabahiis Xuseen Nirig oo xilligaas Aroos kula jiray gabadh u dhalatay beesha Sheekhaal oo la yiraa Canab. wuxuuna kula dardaarmay inuu Ninkaas Xawaadle siiyo lacag dhan shan boqol kun oo dollar.
Galab Khamiisa ayuu Xuseen Nirig u yeeray Carte Cabdi oo jooga Hotel Lafweyn,wuxuuna ku ballamiyay Baar Ubax maalintii xigtay oo Jimca aheyd.
Xuseen Nirig wuxuu isla galabtaas agagaarka SOS, Garaashkii Maalin Taajir ugu yeeray Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor , Saadaq Cumar Xasan oo loo yaqaan Saadaq John oo u dhashay beesha Saleebaan gaar ahaan Juffadda Farax, Reer Muse iyo Madaxeey Xuseen dheere oo u dhashay Saleebaan Juffadda Cabdi Gaab.
Xuseen Nirig wuxuu siiyay lacag laba kun oo dollar aheyd, wuxuuna u ballanqaaday inuu siin doono Labaatan kun oo dollar 20.000$ haddii ay dilaan Ninka Xawaadle ee Maalin taajir lacagta la lahaay Allaha u naxariistee Carte Cabdi.
Jimcahii waxaa Xaafadda Xamar Jadiid ku kulmay Carte iyo Maalin Taajir Aabahiis kadibna wuxuu dib u ballamiyay Jimcahii xigay laakiin markii uu baxay Carte ayey Axmed Qoor Qoor, Saadaq John iyo Madaxeey ku toogteen agagaarka Baar Ubax, halka loo yaqaan Jiiro Gelinsoor.
Axmed Qoor Qoor, Saadaq John iyo Madaxeey Xuseen Dheere waxey Xuseen Nirig u yimaadeen galab Sabti ah, annigoo la fadhiya oo meel kula qayilaya Cabdi Keyton iyo Xasan Basiin.
Markii ay ka soo baxeen ayaan ogaanay iney lacagtii labaatanka kun dollar ka soo qaateen Xuseen Nirig.
Axmed Qoor Qoor ayaa lacagtii qeeybiyay, wuxuu min Shan kun dollar siiyay Saadaq John iyo Madaxeey halka uu isagana toban kun dollar qaatay.
Qoor Qoor wuxuu galab isniin ah u tegay Nin uu ilaalo u ahaan jiray lana dhihi jiray Cabdiwahaab oo Saaxiib la ahaay Sigane kaas oo u dhashay beesha Jiroon Raxan weyn. wuxuu u sheegay inuu hoowlo ganacsi bilaabayo sidaas darteedna uusan ilaalo u siin ahaan karin.
Cabdiwahaab oo ka madax ahaay Hay’ad Samafal waxaa loo geeyay ilaalo cusub.
Qoor Qoor wuxuu dukaan ka furtay Agagaarka Towfiiq Muqdisho halkaas oo uu ku dilay nin u dhashay beesha Abgaal oo ay dhul isku qabsadeen.
Akhri Qisooyinka Qoor Qoor qeybta 1-aad - "Xaaskiisii uu Hinaasaha u furay ee dib u guursaday 5 sano kadib”
Akhri Qisooyinka Qoor Qoor qeybta 2-aad "Qoor Qoor Aabahiis oo Hooyadii Xaadsan u dilay Orgi ay u qashay Jabhadii reerkeeda" ?
LA SOCO, Qeybta 4-aad qisooyinka Qoor Qoor.